‘मदन–आश्रितका हत्यरालाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ’ – mYKantipur
काठमाडौं – तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदनकुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित सडक दुर्घटनामा परी निधन भएको २५ वर्ष पूरा भएको छ। भण्डारी तथा संगठन विभाग प्रमुख आश्रितको सडक दुर्घटनामा नभइ नियोजित रूपमा हत्या भएको एमालेले बताउँदै आएको छ। तर उनीहरूको निधन भएको २५ वर्ष पुग्दासमेत सो घटना हत्या हो वा दुर्घटना भन्ने खुल्न सकेको छैन।
नीतिभन्दा नेता हाबी
२०७५ जेठ ३ गते राष्ट्रिय सभागृहको हलमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘कतिलाई लाग्ला नेकपामा किन दुई अध्यक्ष ? टेम्पो चलाएको हो र ? जेट विमानमा दुईजना नै पाइलट हुन्छन्।’
दुई अध्यक्ष राखेको विषयमा सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि ओलीले अन्य पार्टीलाई थोरै अट्ने सानो टेम्पोको संज्ञा दिएर आफ्नो पार्टीलाई धेरै अट्ने जेट विमानका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। दुई पार्टीबीचको एकता र ओलीले बोलेको उक्त वाक्यले आज ठीक एक वर्ष पूरा गरेको छ। एक वर्षको अवधिमा ओलीले भनेको नेकपाको जेट विमानले गति लिन सकेन। तर एक वर्ष पुग्ने अन्तिमतिर त्यसले उडान त भर्न खोज्यो तर पुरै यात्रु पनि अटाउन सकेन अर्थात् एकता प्रक्रियाको सबै काम टुंग्याउन सकेन।
त्यसो त पार्टी एकताको एक वर्षसम्म नेकपा नीतिले भन्दा पनि व्यक्तिको निर्णय बढी हाबी भएको छर्लङ्गैै देखिन्थ्यो। दुई अध्यक्षकै ठाडो आदेशमा पार्टी सञ्चालन भइरह्यो। पार्टी एकता घोषणापछि नेकपाले तीन महिनाभित्र एकता प्रक्रियालाई टुंग्याउने भने पनि त्यो सम्भव भएन। वर्ष दिनको अवधिमा केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व टुंगिएको छ।
केन्द्रीय समिति बैठक एकपटक मात्र
पार्टी एकताको एक वर्ष पूरा हुँदा नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक जम्मा एकपटक मात्र बस्यो। लामो समयसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेपछि गत फागुन ११ गते नौजना केन्द्रीय सदस्यले बैठक माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई सम्बोधन गरेर महासचिव विष्णु पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। त्यसैगरी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक पनि दुईपटक मात्रै बस्यो। २०७५ को दसैंअघि र सोही सालको मंसिर २८ देखि पुस १३ गतेसम्म बैठक बसेको थियो।
पहिलो स्थायी कमिटी बैठकमा सामान्य छलफल भए पनि खासै केही निर्णय हुन सकेन। दोस्रो स्थायी कमिटी बैठकमा नेता वामदेव गौतमले फरक मत व्यक्त गरेका थिए। अध्यक्षद्वयले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि भीम रावल र हरिबोल गजुरेललगायतले सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि एकता प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि उक्त बैठकले नेकपाका नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। स्थायी कमिटी बैठकमा केही सदस्यले दिएको सुझाव नसमेटिएको भन्दै नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन अहिलेसम्म छापिन सकेको छैन।
चार कार्यदल गठन र विघटन
एकता प्रक्रिया टुंग्याउन नेकपाले चारवटा कार्यदल बनाएको थियो। एकता प्रक्रिया टुंग्याउन बनेको नेकपाको सबै कार्यदल खारेज भइसकेको छ, तर एकता प्रक्रियाको काम भने अझैं टुंगिन सकेको छैन। नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार अध्यक्षद्वयको हस्तक्षेपपछि कार्यदल खारेज भएको हो।
पहिलो कार्यदललाई प्रदेश एकीकरणका लागि कमिटी गठन र्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसलाई सघाउन बनाइएको दोस्रो कार्यदललाई जिल्ला तहको एकीकरणका लागि संख्या तोक्ने जिम्मेवारी थियो। रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेल सदस्य रहनेगरी बनाइएको कार्यदललाई उनीहरूलाई प्रदेश कमिटी सदस्यको खाका पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
चौथो कार्यदल रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट, शंकर पोखरेल, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ गरी नौ सदस्यीय बनेको थियो। उक्त कार्यदलले पोलिटब्युरो गठन, विधान परिमार्जन, प्रदेश कमिटी गठन, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन र तल्लो तहको एकता प्रक्रियाको कामको खाका तयार पारेर पुस मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
सचिवालयले फागुन ९ गते एकता प्रक्रियालाई टुंगोमा पु-याउन बनेको कार्यदल भंग गराएपछि नेकपामा फेरि विवाद सुरु भयो। कार्यदल विघटनपछि कार्यदलमा रहेका नौ सदस्यमध्ये पाँच सदस्य वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्टले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरूले फागुन १२ गते ७ पृष्ठ लामो आठबुँदे समानान्तर प्रतिवेदनसमेत बुझाए। कार्यदललाई सचिवालयबाट भंग गराउने काम पार्टी विधानको धारा ३३ (ग) विपरीत भएका उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
उनीहरूले पोलिटब्युरो सदस्य नभएको जिल्लामा वरिष्ठतम केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए। उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विधानको धारा १८ (घ) २ अनुसार १ सय ४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गर्दा केन्द्रीय कमिटीमा रहेको पूर्वघटकको सदस्य संख्याको अनुपातमा राख्नुपर्नेछ। त्यस्तै २२१ सदस्यीय सल्लाहकार प्रस्ताव गरिएको थियो। कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेलको अनिच्छाले काम हुन नसकेको आरोप लगाइएको थियो।
‘माझी छौ कि कोही किनारा लगाइदेऊ’ भन्ने प्रसंग
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र माधवकुमार नेपाल २०७५ असोज ५ गते देशबाहिर गएका बेला नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर नेता नेपालले फरक मत राखेका थिए। नेपाल स्वदेश आएलगत्तै ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३औं महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका थिए भने दाहाल श्रीमती सीताको उपचारको लागि थाइल्यान्ड गएको बेला कार्यवाहक अध्यक्ष नेता नेपालले पाए। कार्यवाहक अध्यक्ष भएकै बेला २०७५ असोज ११ गते संसद्मा उनले ‘मेरो देश डुब्नै लाग्यो किनारा लगाइदेऊ, माझी छौ कि कोही किनारा लगाइदेऊ’ भन्दै गर्जिएपछि नेकपाभित्रको विवाद सतहमै छताछुल्ल भयो। त्यसो त दुवै अध्यक्ष देशबाहिर रहेका बेला नेपालले स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई बोलाएर बानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा चियापान आयोजनासमेत गरेका थिए।